एनएमसीको एकाइगत साधारणसभा धमाधम - Sajhamanch
२०७८, कार्तिक ११ गते बिहानिको १०:१३:२४ बजे Thursday 28th October 2021
झापा । नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. (एनएमसी) झापाको २९औँ वार्षिक साधारणसभा अन्तर्गत असोज ३ गतेदेखि दिनहुँ एकाइगत साधारणसभा सञ्चालन भइरहेका छन् । संस्थाको बैंकिङ व्यवसाय अन्तरगतका ४४ वटा सेवा केन्द्रलाई एउटा एकाई मानेर ४४ ठाउँमा नै एकाइगत साधारणसभा भइरहेका हुन् ।
सोही शिलशिलामा बनियानी सेवा केन्द्रको साधारणसभा बुधबार सम्पन्न भएको छ । बनियानी स्थित सामुदायिक भवनमा बनियानी कार्यालयगत उपसमिति संयोजक तोमप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा साधारणसभा सम्पन्न भएको हो ।
एकाइगत साधारणसभामा अतिथिको रुपमा कचनकवल गाउँपालिका उपाध्यक्ष निमसरी राजवंशी लगायतको उपस्थिति थियो । कार्यक्रमका संस्थाको केन्द्रीय प्रतिनिधिका रुपमा सञ्चालक समिति सदस्य माधवचन्द्र प्याकुरेल, सावित्रा दाहाल र कर्पाेरेट प्रशासन विभाग प्रमुख चेतन शर्माको उपस्थिति रहेको थियो । केन्द्रीय प्रतिनिधिहरुले अध्यक्षको प्रतिवेदन, लेखा सुपरीवेक्षण समितिको प्रतिवेदन र बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ ।
बनियानी कार्यालयगत उपसमिति सदस्य इन्दिरा श्रेष्ठले शाब्दिक स्वागत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन बनियानी कार्यालय प्रमुख विवेक खतिवडाले गरेका थिए । संस्थाले साधारण सभालाई सहकारी ऐन अनुरूप विकेन्द्रिकृत रुपमा सम्पन्न गर्दै अन्तिम साधारणसभा असोज ९ गते शनिबार समापन गर्दैछ । एकाइगत साधारण सभाबाट प्रतिनिधि छनोट गरी अन्तिम माइन्युट प्रमाणित साधारणसभा सञ्चालन गरिने व्यवस्था छ ।
आज बिहीबार कर्पोरेट कार्यालय क्षेत्र काँकरभिट्टामा साधारणसभा सम्पन्न गरिएको छ । केन्द्रीय प्रतिनिधिका रुपमा अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेती र सञ्चालक ठाकुर शिवाकोटीको उपस्थितिमा सम्पन्न एकाईगत साधारणसभाको प्रमुख आतिथ्यता वडा नं. ६ का अध्यक्ष तामाङ रहेका थिए ।
September 23, 2021 8:19 pm | अर्थतन्त्र,मुख्य समाचार,समाज,सहकारी